Baasaboorka Fayodhawrka Hygieniapassi somali
Ku soodhawaw adeegga Hygienepassport.fi service
Websaytkan waxaad isku diiwaangalin kartaa imtixaanada iyo tabobarrada aqoonta nadaafadda. Sidoo kale waxaad ka dalbi kartaa waxyaalo qoranl iyo wakhti tabobar oo kusaabsan adeegyada Trainify.fi service tukaan onlayn ah si aad ugu diyaargarowdo imtixaankan
Hygienepassport.fi waxay ku bixisaa imtixaanka aqoonta nadaafada luuqado kala duwan Finland oo dhan. Ka dooro goobta iyo wakhtiga imtixaanka ee kuugu fiican liiska imtixaanka oo isdiiwaangali.
Baasaboorka Fayodhawrka waa shahaado muujinaysa aqoonta qofku u leeyahay nadaafadda cuntada. Qofku wuxuu ku heli karaa Baasaboorka Fayodhawrka inuu dhammaysto imtixaanka aqoonta nadaafadda. Aqoonta nadaafadda cuntada waxa xukuma xeerka nadaafadda cuntada (852/2004/EU), iyo Xeerka Cuntada. Shaqaaluhu waa inay haystaan Baasaboorka Fayodhawrka haddii ay gacanta ku hayaan cuntooyinka sida dhibta yar u xumaada oo aan bushqadaysnayn goobtooda shaqada. Tusaale ahaan kafateeriyada, maqaayadaha cuntada, madbakha hay’adeed, maqaayadaha cuntooyinka degdegga ah, tukaanada cuntada, iyo warshado badan oo soosaara cuntadu waa halka shaqaalaha looga baahan yahay inay haystaan hygiene passports.
Waxa looga baahan yahay qofku inuu helo hygiene passport saddex bilood gudahood marka uu shaqada bilaabo. Saddexdan bilood waxa iyana lagu xisaabinayaa shaqada ganacsiga cuntada ee tan kahorraysay ee qofku hayey ee iyana hygiene passport loo baahnaa. Baasaboorka Fayodhawrka-ka laga bixiyo waddamo kale kama shaqeeyaan Finland.
Nidaamka Baasaboorka Fayodhawrka waxa xukuma Hay’adda Cuntada Finish-ka Ruokavirasto.
Imtixaanka Aqoonta Nadaafadda
U diyaargarow imtixaanka adiga oo baranaya meelaha laga diyaariyo imtixaanka aqoonta nadaafadda, iyo agabka akhriska ee nadaafadda cuntada iskuna laylyaya imtixaanka kujira Trainify.fi service.
Imtixaanka aqoonta nadaafaddu wuxuu ka kooban yahay meelaha soo socda:
2. Cunto sumow
3. Ku camalfallada shaqo nadaafadeed
4. Nadaafadda qof ahaaneed
6. Ku camalfallada adigu hubi ee goobaha cuntada
7. Shuruucda iyo Hay’adaha Cuntada Finnish-ka
Imtixaanka aqoonta nadaafadda wuxuu ka kooban yahay 40 su’aalood oo run/been ah. Si ay u dhammaystiraan imtixaanka si fiican kaqaybqaatayaashu waa inay keenaan 34/40. Su’aaluhu waxay ku lug leeyihiin qaybo kala duwan oo nadaafadda cuntada ah. Qofka imtixaanka laga qaadayo wuxuu ku qoraa X sanduuq “runta” ama “beenta”, iyada oo ku xidhan haddii fikradda qofku ay ku raacsan tahay su’aasha iyo haddii kale. Waxa jira su’aalo togan (ee nooca “wax saamaynaya wax kale”) iyo kuwa diidmo ah (ee nooca “wax aan saamaynayn wax kale”).
Wakhtiga loogu talogalay in lagaga jawaabo waa 45 daqiiqo imtixaanka caadiga ah (Finnish & Swedish). Ma jiro wakhti xaddidan imtixaanada xaaladaha gaarka ah (tus.imtixaanada Ingiriisida, luuqadaha kale ee la tarjumay ama qaamuuska). Qofku wuxuu ka bixi karaa goobta imtixaanka 20 daqiiqo kadib marka imtixaanku bilaabmo, isla marka uu imtixaan qaaduhu uu oggolaansho u siiyo inuu bixi karo.
Isticmaalka tarjumaan, qaadista imtixaan afka ah ama imtixaan luuqad kale oo aan ahayn, Finnish, Swedish ama Ingiriisi ama qabanqaabo kale oo gaar ah waa suurogal kaliya imtixaanka xaaladda gaarka ah. qabanqaabada gaarka ah waa in waa in hore loogala sii heshiiyo baraha.
Fadlan ogow in baruhu uu hubin doono aqoonsigaaga marka aad galayso imtixaanka. Fadlan soo qaado aqoonsigaaga rasmiga ah.
Qaabka aqoonsiga la aqbali karo waa:
Kaadhka Aqoosniga, baasaaboor, liisanka dirawalka
Baasaaboorka laajiga, dokumentiga socdaalka qaxootiga
Dokumenti shaabadaysan oo caddaynaya in baasaaboorku uu gacanta ugu jiro hay’ad. Nuqul ah baasaaboorka waa in lagu lifaaqay.
Fadlan ogow qofku inaanu ku caddayn karin aqoonsigiisa tusaale ahaan
Liisanka dirawalka, baasaaboor ama kaadhka aqoonsiga oo dhacsan
Kaadhka Finnish Kela oo sawir leh
Baasaaboorka milatariga Finnish-ka
Kaadhka degganaanshaha (bilaa baasaaboor)
Kaadhka macmiilka xarunta soodhawaynta
Sawirrada kaadhadhka aqoonsiga, baasaaboorrada ama dokumentiyo kale
Nooc kasta oo aqoonsi oo ay sahlan tahay in la beddelo sawirka ama magacu ka maqan yahay ama lambarka sooshiyaal sikiyuuriti
Marka qofku uu gudbo imtixaanka aqoonta nadaafadda, waxay ku heli doontaa shahaado kumeel gaadh ah iimay. Baasaboorka Fayodhawrka-ka rasmiga ah waxa lagu soo diri doonaa 2-4 toddobaad gudahood taariikhda imtixaanka. Haddii aanad gudbin imtixaanka, waxaad gali kartaa markale oo qiimaha la dhimay